QM iyo Maraykanka Oo ka digay hirgelinta go,aanka Masar ku xireyso Madaxda Ikhwaanka ee dalkaas – Radio Daljir
QM iyo Maraykanka Oo ka digay hirgelinta go,aanka Masar ku xireyso Madaxda Ikhwaanka ee dalkaas
Luulyo 12, 2013 4:07 b 0
Washintong, July 12- 2013 – Maraykanka iyo Qaramada Midoobey ayaa si? isku mid ah u canbaareeyey qorshe lagu doonayo in lagu xir xiro hugaamiyaasha Ikhawanul Masulimiin ee dalka Masar, taasi oo ay wado dowlada meleteriga ah ee uu madaxda ka yahay Abdel Monsour.
Afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Jay Carney ayaa sheegay in Washintong ay ka digeyso xariga lala damacsan yahay hugaamiyaasha Ururka mucaaradka ah ee Ikhwanul Muslimiin, xili ay dowlada Masar ku goodisay in ay xirayo dhamaan cidda ku shaqada leh rabshadaha dalkaasi ka socda.
Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobey Bank Moon ayaa isna dhiniciisa ka digay hanjabaad ka soo yeertay xukuumada Qaahir, wuxuu sheegay Mr. Moon in ay noqon karto caqabad cusub oo soo wajahda Masar hadii talaabadaas la qaado.
? Jidka ?kaliya ee lagu guuleysan karo ayaa a, haddii xisbiyada dhamaan lagu dhiiri geliyo loona ogolaado ka qeyb galka waxa dhacaya, ?taasina waa sababta aan u sameynayno dalabka joojinta xeritaanka, wax walbaana waa taageri karnaa? ayuu yiri Afhayeen Carney oo u hadlay Maraykanka.
War-baahinta caalamka ayaa aad u falanqeeyey maanta hadalka ka soo baxay Aqalka cad ee Maraykanka iyo waaxda arimaha debeda, kuwaas oo labbaduba ka hadlay go,aanka Dowlada Masar ay ku amartay in xabsiga lagu tuuro madaxda Ikhwanul Muslimiin, sidoo kale isla shalay waxaa degniin jeediyey Qaramada Midoobey.
Mrs, Jen Psaki ?Afhayeenka waaxda arimaha dibada Mareykanka ayaa dhankeeda cambaareeysay marxalada ka aloosan dalka woqooyiga Afrika ku yaala ee Masar, iyadoo sheegtay in siyaasada Mareykanka ee Masar ay noqoneyso mid hada kadib ay Washintong il gaar ah u yeelanayso hadba sida wax u dhacyaan.
Md. Madoobe oo loo kordhiyey wakhtiga uu magcaabayo Wasiirada iyo Baarlamanka oo la kordhiyey